क्यान्सरको सही निदान र उपचारमा इम्युनोहिस्टोकेमिस्ट्री « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
२०७९, २८ बैशाख बुधबार १३:४२ मा प्रकाशित
डा. गिरिष्मा श्रेष्ठ/ अंकोप्याथोलोजिष्ट
क्यान्सर शरीरको कुनैपनि ठाउँमा असामान्य कोशिकाको अनियन्त्रित बृद्धि हो । क्यान्सर संसारभर मृत्युको प्रमुख कारण हो र संसारमा ज्यान लिने धेरै रोगहरुमध्ये यो दोस्रो स्थानमा रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले बताएको छ ।
क्यान्सर सयौं प्रकारका हुन्छन् ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले सन् २०१८ मा अनुमानित २ लाख २१ हजार २७६ मा गरेको क्यान्सर रजिष्ट्रीमा पुरुषहरुमा फोक्सोको क्यान्सर सबैभन्दा बढी पाइएको छ । त्यसपछि आमाशय थायराइड, प्रोस्टेट, पित्तासय र कलेजोको क्यान्सर रहेका छन् ।
महिलाहरुमा पाठेघरको मुखको क्यान्सर सबैभन्दा बढी भेटिएको छ । त्यसपछि फोक्सो, पाठेघर, डिम्बासय र स्तन क्यान्सर छन् ।
क्यान्सरले कति व्यक्तिको चाँडै ज्यान लिनसक्छ भने कोही क्यान्सर भएरपनि दशकौं बाँचेका उदाहरणहरु पाइन्छ । पहिलो चरणमा पत्ता लागी सही उपचार पाएमा कोलोन क्यान्सर, प्याँक्रियाटिक क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, प्रोस्टेट क्यान्सर र फोक्सोको क्यान्सरका असर न्युन गर्न सकिन्छ ।
वायोप्सीबाट क्यान्सर पत्ता लगाउन सकिएपनि क्यान्सरको प्रकार, यसको खतरा र आवश्यक औषधोपचारको निर्णय लिन इम्युनोहिस्टोकेमिस्ट्रीको जरुरत पर्छ ।
इम्युनोहिस्टोकेमिस्ट्रीको क्यान्सरमा क्रान्ति
क्यान्सर/ ट्युमरको विभिन्न प्रकार छुट्याउन, क्यान्सरले कस्तो रुप लिन्छ ? भन्ने जस्ता पूर्वानुमान गर्नुका साथै उपचारको सही निर्णय लिन इम्युनोहिस्टोकेमिस्ट्री गर्न अनिवार्य हुन्छ । ट्युमरमा रहेका प्रोटिन/एन्टिजेनको उपयोग गरी इम्युनोहिस्टोकेमिस्ट्रीले ट्युमरको प्रकार छुट्याइदिन्छ । साथै क्यान्सरको क्लिनिकल स्टेजिङ र ग्रेडिङ गर्न पनि उपयोग गरिन्छ । यसले ट्युमर डाइग्नोसिस मात्र नभई अरु धेरै रोगहरुको निदानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । जस्तैः नर्भस सिस्टम सम्बन्धि रोग (न्युरोडिजेनेरेटिभ रोग) आदि ।
कुन क्यान्सरका लागि कस्तो प्रकारको औषधि चलाएमा त्यो क्यान्सर निको हुन्छ वा क्यान्सर बिरामीको आयु लम्व्याउन सकिन्छ भन्ने कुराको एकिन गर्न मद्धत गर्छ र यो प्रोस्टेट, स्तन, कोलोनलगायतका क्यान्सरहरुमा रिसर्चहरुले पुष्टि गरिसकेका छन् ।
कुनै पनि ट्युमर घातक भएनभएको छुट्याउन, ट्यूमरको चरण (ग्रेड) निर्धारण गर्न र धेरै फैलिसकेको (मेटास्टेसिस) क्यान्सरको उत्पत्ति पहिचान गर्न पनि यो टक्नोलोजी जरुरत पर्छ ।
यी सबै दृष्टिकोणमा क्यान्सर उपचारको क्षेत्रमा इम्युनोहिस्टोकेमिस्ट्रीले क्रान्ति ल्याएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा इम्युनोहिस्टोकेमिस्ट्रीको अवधारणा सन् १९३० को दशकदेखि शुरु प्रयोगमा आइरहेको छ । नेपालमा इम्युनोहिस्टोकेमेष्ट्रिको व्यापक उपयोगमा आएपनि धेरै ठाउँमा यस प्रकारको सुविधा उपलब्ध छैन । मोलिक्युलर लेवलको यो सेवा निरामयः डायग्नोसिस सेन्टरमा उपलब्ध छ ।
(डा. गिरिष्माले अंकोप्याथोलोजीमा फेलोसिप गरेर नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएर सेवा दिइरहनुभएको छ । हाल उहाँ निरामयः डाइग्नोस्टिकस प्रा.लि. र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)